निजी अस्पतालका डाक्टरलाई सरकारी भत्ता ! – Koshidaily
निजी अस्पतालका डाक्टरलाई सरकारी भत्ता !
access_alarms Koshi daily २४ चैत्र २०७६, सोमबार १३:३७	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं – अब २१ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ । सरकारले १४ दिनको क्वारेन्टाइनलाई बढाएर २१ दिन पर्याएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्त, अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा थप ७ दिन होमक्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताए ।
‘१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई अलिकति परिमार्जन गरिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘१४ दिनपछि टेस्ट गर्ने र त्यसपछि थप ७ दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ । होम क्वारेन्टाइन बसेरनबसेको स्थानीय तहले अनुगमन गर्नेछ ।’
सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउने बढाउने निर्णय गरेको छ । लकडाउन बढेपनि अत्यावश्यक ढुवानी भने कायमै राखिनेछ ।‘खुला सीमाबाट हुने आवागमन पनि वैशाख ३ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने । त्यस्तै बैठकले निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा आउन चाहे सोही अनुसार दरबन्दी मिलान गरिने निर्णय गरेको छ ।
‘निजी क्षेत्रका डाक्टरहरू यदि सरकारी अस्पतालमा आउन चाहनुभयो भने सोही अनुसार दरबन्दी मिलान गरिनेछ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना सम्बन्धी काम गरिरहेका डाक्टरहरूलाई सरकारी डाक्टरसरह नै भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।’ त्यस्तै बैठकले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई यस कामका लागि खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।